‘मसँग विरासत छ’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, फाल्गुण १७, २०७२
‘मसँग विरासत छ’
शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस
१३औं महाधिवेशन के कारण भिन्न छ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरणसँगै संविधानको कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने, आर्थिक विकास गर्न सक्ने गरी नेतृत्व चुन्नु छ । खासगरी आधारभूत लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दायित्व कांग्रेसमाथि छ । यस्तो वेला भइरहेको महाधिवेशन विशेष छ ।
महाधिवेशनले कांग्रेस पार्टीमै आधारभूत परिवर्तन ल्याउँदैछ या नेतृत्व मात्रै बदली गर्नेछ ?
पार्टीमै परिवर्तन ल्याउँछ । किनभने देशले नै फड्को मारिसक्यो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यसको सुदृढीकरण गर्नुछ । सच्चा मानेमा समावेशी नेपाल बनाउनुपर्ने हुनाले पार्टीले पनि त्यसैको ‘फलो’ गर्नैपर्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको अक्षमताले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो भनियो भने सही हुन्छ ?
यसको कारणतिर म अहिले जान चाहन्न । मधेशका केही दलले आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरूका जायज कुरा सम्बोधन गरिनुपर्छ । सीमांकनलगायतका मुद्दा पनि समाधान गर्नुपर्छ ।
भारतसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्नु जरुरी छ । अहिले हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । पेट्रोल, ग्याँस पाइएन । चीनलगायतका देशसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्नु अति आवश्यक छ ।
देशका हरेक ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहिं चुकेको देखिन्छ । कारण के हो ?
प्रजातन्त्रमा सरकार आउँछन्, जान्छन् । सधैं टिक्नुपर्ने त प्रजातन्त्र हो । नेपालमा त प्रजातन्त्र पनि सधैं टिकेन । त्यसैले यतिवेला प्रजातन्त्रकै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । देशको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्थिर र बलियो प्रजातन्त्र हो ।
जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएपछि पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त जहिल्यै रहन्छ । संघीयता र गणतन्त्रलाई स्थायी रुपमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ’ गर्न हाम्रो पार्टी सधैं लागिरहेकै छ । दोष हाम्रो पार्टीको मात्रै छैन ।
प्रजातन्त्र सधैं खतरामा परिरहनुमा कांग्रेस पनि दोषी छ नि होइन ?
त्यसरी दोष देखाएर हुँदैन । आखिर प्रजातन्त्रका लागि लड्ने त कांग्रेस नै हो नि । नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी कुन छ नेपालमा ? जन्मकालदेखि नै बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो यो । अरु पार्टी त बल्ल प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरित हुँदै आउँदै छन् ।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
गिरिजाबाबु र मेरो बीचमा पार्टी एकीकरण भएको हो । तर, अहिले पनि पार्टी पूर्ण रुपमा एकीकरण गर्न बाँकी नै छ । त्यसको दायित्व ममाथि छ ।
अर्को; कर्णाली क्षेत्र, आदिवासी, महिला, मधेशी, दलित सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु छ । नयाँ पार्टी गठन गर्दा नै पहिलो पटक पार्टीमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने व्यक्ति मै हुँ ।
अब म त्यही सिद्धान्त लागू गर्न चाहन्छु । सबैबीच मेलमिलाप र प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरेर सबैको स्वामित्वभाव विकास गर्न पनि कांग्रेसलाई मेरो आवश्यकता छ । जुँगाको रेखी नबस्दैदेखि पार्टी र प्रजातन्त्रका लागि जेल परेको, पिटाइ खाएको मान्छे हुँ म । बीपी, गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाबाबुको खास उत्तराधिकारी हुँ म । उहाँहरूको ‘लिगेसी’ मैसँग छ ।
तर, तपाईंमाथि नै प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
संसद् भंग गर्नु नै प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको हुन्छ भने सबभन्दा पहिले गिरिजाबाबुले बुझाएको भन्नुपर्छ । त्यसवेला ६ पार्टीको बैठकले माओवादीको आतंकका कारण चुनाव सार्नुप¥यो भनेपछि मात्र मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनाव सार्ने निर्णय गरें । त्यो बैठकमा सुशीलजी पनि हुनुहुन्थ्यो । सबैले भनेपछि म डराएँ । पार्टीले नै भाग लिएनन् भने के हुन्छ भन्ने लाग्यो ।
चुनाव सारेपछि सत्ता राजाले खोसे । यो त मलाई चुनाव सार्न भनेर राजालाई खोस्न लगाउने सल्लाह दिएजस्तो भयो । यसमा त उनीहरू नै राजासँग मिलेका थिए जस्तो लाग्छ मलाई । यसमा ६ पार्टीहरू त्यत्ति नै दोषी छन्, जति म छु ।
चुनाव सार भन्ने सुशील कोइराला र गोविन्दराज जोशीहरू चाहिं सही, म चाहिं गलत ? आन्दोलन भयो, प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको । प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुनर्बहाली भएपछि फेरि राजाले खोसे । बीपी पछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोसिने म नै हुँ । बीपीपछि राजाले जेल हालेको पनि गिरिजाबाबु र मलाई नै हो ।
पार्टी फुटाउनुभयो, एकता गर्नुभयो । एकतापछि पनि ६०–४० को गुटबन्दी बाँकी नै रह्यो, किन ?
यो ६०–४० केही होइन । कुरो के हो भने आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई नै साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेपछि म पार्टी सभापति बनेको हो । त्यो वेला वास्तवमा रामचन्द्रजीलाई पार्टी सभापति बनाउने कुरा थियो । उहाँका लागि फूलमाला तयार पारेर राखेका थियौं । बिहान ८ बजेदेखि कु¥यौं, १ बजेसम्म नआएपछि सबै साथीहरूले ‘ल तँ नै बन्’ भने । अनि मात्रै म बनें ।
१२औं महाधिवेशनलाई पनि एकता महाधिवेशन भनिएको थियो र अहिले पनि त्यही भनिंदैछ ?
यसअघि किन एकता भएन भन्नेतर्फ जान चाहन्न । तर, साँचो एकता यो महाधिवेशनबाट हुन्छ ।
तपाईं पार्टी सभापतिमा चुनिने आधार के हुन् ?
यसबारे मैले धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, म सभापति बन्नेमा पूरै विश्वास छ ।
पार्टी फुट्ने वेला रामचन्द्र पौडेललाई सभापति स्वीकार गर्ने तपाईं अहिले चाहिं किन मिल्न नसक्ने ?
त्यसैले त मैले रामचन्द्रजीलाई मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनिरहेको छु नि ।
तपाईं नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने कांग्रेस कस्तो बन्छ ?
पार्टी पूर्ण समावेशी हुन्छ । सबैमाथि न्याय हुनेछ । गुटबन्दी र विवाद अन्त्य गर्छु । पार्टीलाई बलियो बनाउँछु । प्रजातन्त्र बलियो बनाउन पनि पार्टी बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
यी त योजना भए, आजको कांग्रेस कस्तो बन्दैछ ?
नेपाली कांग्रेस जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो । सच्चा मानेमा जनताको हितैषी पार्टी हो । समावेशी पार्टी हो । तल्लो तहकाले आफ्नो महसूस गर्ने पार्टी हो ।
कांग्रेसको मुख्य जनाधार भएको मधेशमै गाउँ–नगरमा अधिवेशन गर्न गाह्रो भयो । विज्ञप्ति निकालेरै सुरक्षा माग गर्नुपर्‌यो । कसरी यस्तो भयो ?
हरेक पार्टीले यस्ता कार्यक्रम गर्दा देशैभर सुरक्षाको वातावरण माग गर्दछ । मधेशमा हामीलाई सहयोग गर्छन् । मधेशमा पार्टी जीवन्त छ ।
कांग्रेस नीतिगत अस्पष्टताका कारण सधैं आलोच्य हुँदै आएको छ, यसपटकको महाधिवेशनले नीतिगत प्रष्टता ल्याउँछ ?
नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुनै बाँकी छ । केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेपछि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी प्रस्तावित विधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
१४ अञ्चल हुँदा भूगोलको हिसाबले एक अञ्चलबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य चुनिन्थ्यो । संविधान अनुसार अञ्चल नरहेपछि अब भूगोलको आधार सात प्रदेश मानिएको छ । नेताविशेषलाई हेरेर पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी संशोधन हुँदैन । देश संघीयतामा गइसकेको छ । त्यसै अनुरुप संरचना बनाउन महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरिनेछ । अहिले गाउँ, क्षेत्र, जिल्लाको अधिवेशन सकिएपछि केन्द्रमा मात्र पदाधिकारी संख्या बढाउनुको अर्थ छैन ।
कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित बनेको छ । यसपटक पनि गुटगत प्रतिस्पर्धा नै हुने देखिन्छ नि ?
गुटको राजनीति थियो भने त्यो अन्त्य हुन्छ । अहिले गुट छैन । महाधिवेशन प्रतिस्पर्धालाई नै गुट भन्ने हो भने केही भन्नु छैन ।
कांग्रेसका आगामी कार्यभार के हुन् ?
तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुछ । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुछ । संविधान अनुसार पार्टी संरचना बनाउनुछ ।
यसमा केही नबोलौं । सरकार बनाउने–गिराउने उद्देश्य छैन । हामी बलियो विपक्षी बन्न चाहन्छौं ।